သဒ္ဓါလှိုင်း: January 2011
တိမ်တွေကင်းစင်လို့ ထိန်ထိန်သာနေတဲ့ လမင်းကြီးရဲ့ လင်းရောင်ခြည် အမိုးအောက်မှာ ဟိုတစု ဒီတစု ဟိုတယောက် ဒီတယောက်နဲ့ ဥဒဟို သွားလာနေကြတဲ့ အတ္တ၀တ်ရုံလွှာ လွှမ်းခြုံထားကြတဲ့ ၀တ်ရုံလွှာတွေနဲ့ လူသားတွေ…. လူသားတွေ………လူသားတွေ!!!
၀တ်ရုံလွှာတွေရဲ့ အရောင်အဆင်းနဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်တွေကတော့ မတူကြပါကလား.။ တချို့ကျတော့လည်း ၀တ်ရုံလွှာအထူကြီးတွေနဲ့ အထပ်ထပ်ဝတ်ထားလို့။ တချို့ကျတော့လည်း တထပ်တည်းပေ့ါ။ တချို့တွေရဲ့ ၀တ်ရုံလွှာတွေကတော့ လှပအသက်ဝင်နေသလို… တချို့တွေကတော့ မလှမပမသပ်မရပ်နဲ့…။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ၀တ်ရုံလွှာတွေကို ၀တ်ထားကြရမှာ ပါပဲလား.. မဖြစ်မနေ ၀တ်ကြရမှာလား.. တွေးတောရင်း… လမင်းကြီးရဲ့ အလင်းရောင်အောက်မှာ ရောနှော သွားလာနေမိတယ်။
တချို့တွေကတော့ ၀တ်ရုံလွှာကြီးကို ၀တ်ရတာကိုပဲ ဂုဏ်ယူပီတိဖြစ်နေကြလေရဲ့..။ ၀တ်ရုံလွှာကြီးရဲ့ တန်ဖိုးက ဘယ်လောက်များ ကြီးကျယ်ခမ်းနားနေလို့ပါလိမ့်.။ မိမိရဲ့ ၀တ်ရုံလွှာကိုပဲကြည့်ပြီး ကြည်နူးနေသလို သူတပါးရဲ့ ၀တ်ရုံလွှာတွေကို ကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းနေပါရဲ့လား..။ မိမိရဲ့ ၀တ်ရုံလွှာက တပါးသူကို မထိခိုက်ပဲ တန်ဖိုးရှိပြီး လှပအသက်ဝင်နေပါရဲ့လား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူသားအားလုံးရဲ့ မတူသော ၀တ်ရုံလွှာတွေကို ကြည့်မိရင်း ၀တ်ရုံလွှာမ၀တ်ထားကြတဲ့ တချို့သောလူတွေရဲ့ ပုံရိပ်လွှာကို မြင်ဖြစ်အောင် မြင်လိုက်မိတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း ဘာလို့များ ၀တ်ရုံလွှာတွေကို မ၀တ်ထားကြပါလိမ့်။ မိမိကိုယ်တိုင်က ၀တ်ချင်စိတ်မရှိလို့ပေလား.. တပါးသူနဲ့ မတူရလေအောင် မ၀တ်ထားခြင်းပေလား… ၀တ်ထားခြင်းကို မနှစ်သက်လို့ပေလား… လားပေါင်းများစွာ စဉ်းစားရင်းနဲ့…!!!
တချို့ရဲ့ ၀တ်ရုံလွှာတွေကတော့ ကြည့်ကောင်းရုံတင်မက တန်ဖိုးရှိမယ့် ၀တ်ရုံလွှာကောင်းလို့ အထင်ရောက်စေမယ့် ၀တ်ရုံလွှာကြီးတွေနဲ့.။ တချို့ဝတ်ရုံလွှာတွေနဲ့ တချို့ဝတ်ရုံလွှာတွေကတော့ တူညီနေတာကို တွေ့ရပြန်တယ်။ တူညီနေတာက အရောင်အဆင်းလား. တန်ဖိုးလား.. ပုံသဏ္ဍာန်လား… ကြီးမြတ်မှုလား…. အံဝင်နေမှုကြောင့်များလား…… !
တချို့ကျတော့လည်း ၀တ်ရုံလွှာကြီးကို ၀တ်ဆင်ပြီး လွင့်မျော သွားနေတဲ့ တိမ်လွှာနောက်ကို လိုက်လို့.. တချို့ကျတော့လည်း မသေချာ မရေရာတဲ့ လမ်းခရီးနောက်မှာ မျောပါလို့.. တချို့ကျတော့လည်း လွန်ဆန်ခွင့် မရှိတဲ့ အချိန်ကာလနောက်ကို လိုက်ရင်း.... တချို့ကျတော့လည်း မျှော်လင့်ချက် ရေစီးကြောင်းနောက်ကို လိုက်ပါလို့….
တချို့ကတော့ ၀တ်ရုံလွှာကြီးကို တထပ်ပြီးတထပ် ထပ်လို့သာ ၀တ်နေတော့တယ်။ အထပ်ထပ်သော ၀တ်ရုံလွှာကြီးတွေနဲ့ အနေအထိုင် ကျပ်တည်းမယ့် အဖြစ်ကိုလည်း တွေးကြည့်မိပါရဲ့။ ဘာလို့များအထပ်ထပ် ၀တ်နေကြပါလိမ့်။
တပါးသူရဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ ၀တ်ရုံလွှာကို မိမိရဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ ၀တ်ရုံလွှာနဲ့ ခြယ်မှုန်းပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာလေးတခု ဖန်တီးခွင့်သာ ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့.။
လူသားအားလုံးလည်း တပါးသူရဲ့ ၀တ်ရုံလွှာကို မထိခိုက်တဲ့ တန်ဖိုးရှိ ရိုးစင်းလှတဲ့ ၀တ်ရုံလွှာမျိုးကို ၀တ်ဆင်နိုင်ကြဖို့ ရည်သန်မိပါတယ်။
ကျမလည်း ကျမရဲ့ ၀တ်ရုံလွှာကို မသက်မသာ ငုံ့ကြည့်မိလေရဲ့!!!!!
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 1:45 PM 10 comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 10:10 AM 10 comments: